Miyay tahay in Kirishtaanka cadeecaan sharciga Baybalka Hore?
Su’aal: Miyay tahay in Kirishtaanka cadeecaan sharciga Baybalka Hore?
Jawaab: Fahamka arintaan waxaa la ogaanayaa in sharciga Baybalka Hore la siiyay dadka reer Israa’iil, ma ahan Kirishtaanka. Qaar ka mid ah sharciyada waxay muujinayaan Yahuuda sida loo cadeeco oo Illaah loo raaliyo (Tobanka Qaynuun, tusaale ahaan). Qaar ka mid ah sharciyada waxay muujinayaan yahuuda sida ay u caabudaan Illaah iyo loo badelo dambiga (nidaamka alabariga). Qaar ka mid ah sharciyada waxaa loogu talo galay inay ka duwaneysiiso Yahuuda dadka kale (sharciyada cuntada iyo dharka). Ma jiraan qaar ka mid ah sharciyada Baybalka Hore ee ku xiran Kirishtaanka maanta. Goortii Ciise ku dhintay istilaabta, Wuxuu soo afjaray sharciga Baybalka Hore (Rooman 10:4; Galatiya 3:23–25; Efesos 2:15).
Meesha sharciga Baybalka Hore, waxaan ka hooseynaa sharciga Masiixi (Galatiya 6:2), taas oo ah in la “jeclaado Illaaha ee Illaahaaga la jiro qalbigaaga oo dhan iyo dhammaan ruuxa iyo dhammaan maskaxdaada…iyo jeclaanta dariskaaga sida nafsadaada” (Matayos 22:37-39). Haddii aan u hogaansano labadaas qaynuun, waxaan buuxineynaa dhammaan inta Masiixiga nooga baahanyahay inaga: “Dhammaan Sharciga iyo Nabiyada waxay joojiyeen labadaan qaynuun” (Matayos 22:40). Hadeer, tani micnaheeda ma ahan sharciga Baybalka Hore ee aan maanta waafaqsaneyn. Kuwa badan ee qaynuunada sharciga Baybalka Hore waxay ku soo dhacaan qeybaha “Illaah La jeclaanayo” iyo “Dariskaaga la jeclanayo.” Sharciga Baybalka Hore wuxuu noqon karaa boorka jahada ee ogaanshaha sida loo jeclaanayo Illaah iyo ogaanshaha waxa ay tahay jeclaanshaha dariskaaga. Isla waqtigaas, si loo dhaho in sharciyada Baybalka Hore quseeyo Kirishtaanka maanta waa qalad. Sharciga Baybalka Hore waa qeyb (Yacquub 2:10). Midkood dhammaan inta ay quseyso, ama ma jiro mid ka mid ah iyaga oo quseeyo. Haddii Masiixi buuxiyo qaar ka mid ah iyada, sida nidaamka alabariga, Wuxuu buuxiyay dhammaan dadaalada.
“Tani waa jaceylka Illaah: ee loogu hogaansamayo qaynuunadaan. Iyo qaynuunadiisa si uma cusla” (1 Yooxanaa 5:3). Tobanka Qaynuun waxay ahaayeen si muhiim ah u ahaayeen dulmarka sharciga Baybalka Hore. Sagaal ka mid ah Tobanka Qaynuun waxaa si cad loogu celceliyay Baybalka Cusub (dhammaan aan ka aheyn qaynuunka lagu sameynayo maalinta Sabtida). Sida iska cad, haddii aan jacelnahay Illaah, ma caabudeyno illaahyo been ah ama uma sajuudeyno sannamyada. Haddii aan jecelnahay dariskeena, ma dileyno iyaga, been uma sheegeyno iyaga, kumana sameyneyno siino iyaga ka soo horjeedo, ama ma damceyno waxay iyaga leeyihiin. Ujeedada sharciga Baybalka Hore waa xukumida dadka ee awoodeena sharciga ku joogteeyo iyo u tilmaamo baahideena ee Ciise Masiixi sida Badbaadiye (Rooman 7:7-9; Galatiya 3:24). Sharciga Baybalka Hore marnaba Illaah uguma talogalin inuu ahaado sharciga caalamka ee dadka oo dhan oo marwalba ah. Waxaa jeclaaneynaa Illaah iyo jeclaano dariskeena. Haddii aan ugu hogaansano qaynuunadaas si aaminaad leh, waxaan joogteyneynaa dhammaan wax Illaah naga rabo inaga.